Madzimai Akatiza Hunhapwa kuKuwait Vadzokera Kumumba neChishanu
Kubvumbi 27, 2016
FILE -- In this Sept. 29, 2014, file photo, the first Boeing 747-8 Intercontinental airplane to be delivered to Air China is moved into position from Boeing's assembly facility to Paine Field in Everett, Wash.
VaMudenda vaudza Studio7 kuti vakwanisa kuita nhaurwa nehurumende yeKuwait kuti mamwe madzimai nevasikana vanga vari muhunhapwa vakakwanisa kutiza kubva kwavaishana vanosvika makumi matatu nevaviri vadzokere kumusha navo neChishanu.
Madzimai nevasikana makumi matatu nevaviri vanga vari muhunhapwa kuKuwait vari kutarisirwa kudzokera kumusha neChishanu.
Izvi zvataurwa nemutauriri wedare reparamende, Va Jacob Mudenda, avo vakasvika muKuwait neChipiri umo vari kushanya nedzimwe nhengo dzeparamende.
VaMudenda nevamwe vavo vari kuda kuona mafambisirwo anoitwa mabasa eparamende munyika umu.
Asi VaMudenda vapfura shiri mbiri nedombo rimwe chete sezvo vakakwanisa kusangana nevanhukadzi vakatiza hunhapwa mushure mekunyeperwa kuti vachanoita mabasa epamusoro munyika iyi.
VaMudenda vaudza Studio7 kuti vakwanisa kuita nhaurirano nehurumende yeKuwait kuti mamwe madzimai nevasikana ava vadzokere kumusha navo neChishanu.
Madzimai nevanasikana vane chitsama vanonzi vakaenda kuKuwait vachinoshava asi zvinhu zvakazovashatira vasvika ikoko vamwe vavo vachishandiswa zvisina zororo nekubhinwa.
"Taudzwa nemumiriri weZimbabwe umo muno muKuwait kuti pane vanasikana nemadzimai vange vachishandiswa senhapwa uye vamwe vacho vachibhinyiwa izvo zvaita kuti tiite hurukuro nevakafanobata basa remutungamiri wenyika ino uye vari ivo vanoona nezvekudyidzana kweKuwait nedzimwe nyika kuti tikwanise kudzokera nevana vedu kumusha," VaMudenda vaudza Studio7.
"Tinofara kukuzivisayi kuti mushure menhaurwa idzi takwanisa kuwana rutsigiro kubva kune shamwari dzedu muno muKuwait nekumusha kuti tikwanise kutengera madzimai vanosvika makumi matatu nemaviri matikiti ekuti vadzokere kumusha nesu neChishanu," VaMudenda vaenderera mberi.
VaMudenda nevamwe vavo vari kupedza kushanya kwavo muKuwait neChishanu umo vanoti vakakwanisa kufamba zvakanaka uye vakadzidza zvakawanda kubva kune dzimwe nhengo dzeparamendo dzemunyika iyi.
Hurukuro NaVa Jacob Mudenda